e.l.f.Studio Blush | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Berry Merry Blushing Rose Candid Coral Fuchsia Fusion Giddy Gold Gotta Glow Mellow Mauve Peachy Keen Pink Passion Tickled Pink Twinkle Pink
ရွေးချယ်ရန် အရောင် ၁၀မျိုးရှိခြင်း
2016 ဇှနျ 8
ဒါလေးသုံးပြီးတော့ အလှပြင်ထားတာ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းသွားတယ်.. အလက်လက်ကလေးတွေပါပြီးတော့ အရမ်းကြီးလည်း အရောင်မတောက်ဘူး။။။အရည်အသွေးကလည်းကောင်းတဲ့အတွက် အကြာကြီးခံတယ်.. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
very nice, easy to apply, vivid color, I love it နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 ဖဖေျောဝါရီ 10
elf က blush တော်တော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အရမ်းသဘောကျတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2015 ဒီဇငျဘာ 21
I love this blush from ELF . It is my go to blush that adds some brightness to my face . A little goesalong way and I also love the packaging as well. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Studio Blush